ULakay uphenduke iqhawe iDowns inqoba - Amahlubi Nation
IZINGUQUKO zikaPitso Mosimane esiwombeni sesibili somdlalo weSemi-Final eNedbank Cup zize nezithelo ezinhle, njengoba abadlali bakhe abafake kamuva okunguKeletso Makgalwa noLyle Lakay kuyibona abaqinisekise ukuthi iDowns idlulela emidlalweni wamanqamu, emidlalweni enqobe kuwo ngo 3 – 2 ishaya iBidvest Wits e-Orlando Stadium, eSoweto izolo ebusuku.
ISundowns yiyo evule ngegoli okube iphenathi evalelwe enethini nguRicardo Nascimento waseBrazil ngomzuzu ka-37, lokho okwenze ezikaPitso zaya ekhefini zihamba phambili ngo 1 – 0. Kuthe uma zibuya ekhefini iWits yabuya ngamandla lokho okuholele ekutheni ishaye igoli lokulinganisa, elivalelwe enethini nguTerrance Dzvukamanja waseZimbabwe ngomzuzu ka-76.
Ngemuva kwemizuzu eyisihlanu iSundowns ibuye ngamandla futhi yavalela phakathi igoli lesibili elishaywe nguMakgalwa ngomzuzu ka-81, okuphinde kwadlula eminye imizuzu emihlanu wabuya futhi uDzvukamanja ezohlenga umkhumbi weClever Boys.
Kuthe sekucaca ukuthi lo mdlalo usuzoya kwi-extra time iDowns yathola i-free kick ngaphandle kwebhokosi. Unyawo lwesokunxele lukaLakay yilo olukopelise phakathi le free kick ezintini akangabona lutho unozinti weWits, uBrighton Mhlongo esikhathini esengezwe ngunompempe, yaguqa kanjalo-ke iWits eholwa nguGavin Hunt.
Ngaphambi kwalowo mdlalo kwiSemi-Final yokuqala iBloemfontein Celtic icoboshise iBaroka FC ngo 3 – 0, wamagoli avalelwe enethini nguNdumiso Mabena namabili kaVictor Letsoalo.